Momba anay | Ningbo Horizon Magnetic Technologies Co., Ltd.
Ny taona 2011 dia nanatri-maso ny tsena adala amin'ny akora tsy fahita eto an-tany, indrindra ny PrNd sy ny DyFe, izay akora fototra ho an'ny andriamby tsy fahita eto amin'ny tany Neodymium. Ny hadalana koa dia nanapaka ny rojom-pamokarana maharitra ary nanery ny mpanjifa mifandraika amin'ny andriamby hitady mpamatsy andriamby Neodymium azo antoka. Natosiky ny filan'ny mpanjifa, tamin'ity taona ity, Ningbo Horizon Magnetic Technologies Co., Ltd. dia natsangan'ny ekipa matihanina iray manana fahaiza-manao lalina sy traikefa amin'ny sakan'ny sahan'andriamby.
Raha te-handray ny filan'ny mpanjifa tena be dia be izahay, dia manana fitaovana fikarohana, famokarana ary fanandramana manara-penitra, izay manampy anay hankafy ny fitomboana nefa mitombo. Satria orinasa antonony izahay izay mamokatra andriamby Neodymium 500 taonina, afaka nifandray haingana tamin'ny fangatahan'ny mpanjifa betsaka momba ny andriamby sy ny fivorian'ny andriamby isan-karazany isika, toy ny andriamby Neodymium, manidy magnet, chamfer andriamby ary mampiditra andriamby, andriamby fanjonoana, andriamby fantsona , andriamby faribolana, andriamby nopetahana fingotra, andriamby vilany, andriamby birao, andriamby moto, sns.
Noho ny habeny antonony manokana dia azontsika tsara ny toe-javatra misy eo amin'ny orinasa antonony, ny fepetra takiana ary ny olany. Noho izany dia manolo-tena izahay hiara-hiasa sy hanampy ny mpanjifa salantsalany handroso.
Ankoatr'izay, maro karazana sy haben'ny fivorian'ny andriamby mahazatra no misy ao anaty tahiry mba hahafeno ny fepetra takian'ny mpanjifa amin'ny fotoana ilana azy.
Azonao atao ny milaza aminay momba ny tetikasanao ary afaka manampy anao izahay avy amin'ny hevitra ka hatramin'ny famokarana serial. Tsy maninona na eo am-pamolavolana, amin'ny famolavolana na amin'ny famokarana ianao izao, dia ho resy lahatra ianao fa ny ekipa mahay mamorona Horizon Magnetics sy ny ekipam-pamokarana dia afaka manome fotoana sarobidy sy fepetra mahomby.
Andriamby Horizon dia orinasa nitazona soatoavina hatrizay. Ny soatoavinay dia hita taratra amin'ny fomba fitantananay ny orinasanay amin'ny fifampiraharahana amin'ireo mpiara-miasa aminay, ny mpiasa ary ny fiarahamonina.
Andraikitra:Izahay dia mitazona ny andraikitray amin'ny ho avy sy ny fiarahamonina amin'ny alàlan'ny famolavolana sy famokarana andriamby tsara sy vahaolana andriamby hamaly ny filan'ny mpanjifanay amin'ny tsena mivoatra hatrany. Manolo-tena izahay hampiroborobo ny andraikitra mahaleo tena sy ny toe-tsain'ny ekipa, ary handray anjara an-tsitrapo amin'ny famerenana, fanaraha-maso ary fanatsarana hatrany ny fomba fiasanay, ny fahombiazany ary ny fahombiazany. Fantatsika fa ny adidintsika amin'ny fiarahamonina dia azo antoka amin'ny fahombiazan'ny orinasantsika. Ankoatr'izay, tokony hamporisika ireo mpiara-miasa amintsika ihany koa isika hanaraka fari-pitondrantena etika mitovy amin'izany.
Fanavaozana:Ny fanavaozana dia vato fehizoro amin'ny fahombiazan'ny Magnetics Horizon. Izahay dia mitady aingam-panahy isan'andro amin'ny fanahinay mamorona ary mikendry ny fanavaozana tsy tapaka amin'ny famoronana vahaolana mbola tsy misy ary manaraka làlana vaovao mba hahatonga ny vina anio ho lasa tena izy rahampitso. Mampivelatra kolontsain'ny fahalalana, fikarohana ary fanofanana hafa izahay izay manokatra faravodilanitra vaovao ho an'ireo mpiara-miombon'antoka aminay sy ny tenanay.
Rariny:Izahay dia mijery ny fahamendrehana ho toy ny fepetra iray amin'ny fahombiazan'ny orinasanay rehefa mifampiresaka sy amin'ireo mpiara-miasa aminay. Tsy maninona na mpamatsy na mpanjifa izahay, dia tokony hanaja anao sy hanaja anao izahay! Mandritra izany fotoana izany dia tsy maintsy manaraka ny fifaninanana ara-drariny sy maimaim-poana amin'ireo mpifaninana isika.